Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zaseKazakhstan zokuhamba » I-Kazakhstan yenza iiveki ezimbini zokuvalelwa zodwa kubo bonke abasuka e-India
Abahambi bafika bevela okanye betyelele e-India kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo beza kubekwa bodwa iintsuku ezili-14 babuyele eKazakhstan.
Iintsuku ezili-14 zokuthintela ukuvalelwa emakhaya zibhengezwe kubo bonke abahambi abavela eIndiya
Abahambi abavela kwamanye amazwe kufuneka bangenise uvavanyo lwe-PCR ngesiphumo esibi esigqithisiweyo ubuncinci kwiintsuku ezintathu ngaphambili
Abahambi abane-COVID-19 yovavanyo olubi lwe-PCR bakwangaphantsi kwekhaya
I-Kazakhstan inyanzelise ukuthintelwa kwamakhaya kwiintsuku ezili-14 kubo bonke abahambi abafika bevela e-India ngaphezulu kweenkxalabo ze-COVID-19.
Ngokomyalelo ohlaziyiweyo wegosa eliyintloko lezonyango laseKazakh, abahambi abafike bevela okanye betyelele i-India kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo bayahlaliswa bodwa iintsuku ezili-14 babuyele eKazakhstan. Abantu abakhwele kuvavanyo olubi lwe-COVID-19 PCR bakwangabekwa bodwa ekhaya.
Abakhweli abasuka kwamanye amazwe banyanzelekile ukuba bangenise uvavanyo lwe-COVID-19 PCR ngesiphumo esibi esigqithisiweyo kwiintsuku ezintathu ezidlulileyo. Abo bangenalo uvavanyo bafakwa kwizibonelelo zokuvalelwa bodwa ukuya kuthi ga kwiintsuku ezintathu ukuvavanyelwa i-COVID-19.
Abantwana abangaphantsi kweminyaka emihlanu ubudala bekhatshwa ngabo baneemvavanyo kunye nabantu abagonywe ngokupheleleyo i-COVID-19 enamaxwebhu aqinisekisa ukuba ugonyo luvumelekile ukuba bangabinalo uvavanyo lwe-PCR xa bengena eKazakhstan.